AMISOM oo war kasoo saartay Qasaaraha ka dhashay Weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen Xarunta Xalane - iftineducation.com
iftineducation.com – Dagaalyahano katirsan Xarakada Al-Shabaab oo wali tiradooda rasmiga ah la heyn ayaa shalay duhurkii waxa ay weerar qorsheesan ku galeen Xarunta AMISOM ee Xalane oo ku dhagan Garoonka Aadan Cadde, halkaas oo ah Taliska ugu weyn AMISOM sidoo kale ay daganyihiin Safaarado reer Glabeed iyo Saraakiil katirsan Qaramada Midoobay.
Warsaxafadeed kasoo baxay Taliska AMISOM ayaa lagu sheegay in Ragii weeraray Xarunta xalane ay xirnaayeen dareeska Ciidanka Dowlada Soomaaliya, waxa ayna sheegtay AMISOM in ragaasi in mudo ah ay isku gadaameen xarunta balse aysan usuurto galin in ay gaaraan goobaha muhiimka ah.
War saxaafadeedkaan taliska AMISOM kasoo baxay waxaa lagu cadeeyay in tirada dadka ku geeriyooday weerarkii shalay ay gaarayaan 9 ruux oo 5 ka mid ah ay ahaayeen dablaydii xerada weerartay, 3 askari oo AMISOM ka tirsanaa iyo ruux rayid ah oo kusugnaa Gudaha Xalane.
AMISOM ayaa sidoo kale sheegtay in nolosha lagu qabtay sadax kamid ah ragii Al-Shabaab katirsanaa ee weeraray Xarunta Xalane, waxa ayna AMISOM tilmaantay in ay dib ula wareegeen ammaanka xerada, xaaladana ay sidii hore ku soo laabatay,
Al-Shabaab ayaa sheegatay Masuuliyada weerarka shalay ka dhacay gudaha Xarunta Xalane, waxa uuna Afhayeenka Shabaab Sheekh Cali Dheere sheegay in weerarkaasi ku dileen Saraakiil ajanaiib ah iyo Ciidamo katirsan AMISOM.
Ragii Xalane Weeraray Muuqaalkooda -Nala daawo